जीपीएसको साथ प्रणाली
मोबाइल आपतकालिन प्रतिक्रिया प्रणालीहरू कसरी काम गर्छन्?
तपाईं जहाँ जानुहुन्छ आफ्नो आपातकालीन चेतावनी प्रणाली लैजानुहोस्। यसलाई आफ्नो घाँटीमा लगाउनुहोस् वा यसलाई बेल्ट क्लिपमा वा तपाईंको जेब वा पर्समा बोक्नुहोस्। यदि तपाईंसँग आपतकालिन छ र साथीहरू, परिवारका सदस्यहरू, पुलिस, फायर डिपार्टमेन्टहरू वा आपतकालीन चिकित्सा सेवाहरू सम्पर्क गर्न आवश्यक छ भने मोबाइल आपतकालीन प्रतिक्रिया प्रणालीमा बटन थिच्नुहोस्।
संसूचक सेलुलर नेटवर्क को माध्यम बाट तपाइँलाई अमेरिका मा आधारित जीवन सुरक्षा अपरेटरहरु को लागी कनेक्ट गर्दछ। तिनीहरूले तपाईंलाई सोध्नु पर्छ कुन प्रकारको मद्दत तपाईंलाई आवश्यक छ र मद्दत पठाउन उपकरणको GPS स्थान प्रयोग गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ आपतकालको समयमा जवाफ दिन सक्नुहुन्न भने चिन्ता लिनु पर्दैन। हाम्रो जीवन सुरक्षा अपरेटरहरूको टीमले तपाइँको आपतकालिन सम्पर्कहरू सम्पर्क गर्नेछ। यदि हामी तपाईंको आपतकालीन सम्पर्कमा पुग्न सकेनौं भने हामी9१११ मा सम्पर्क राख्नेछौं र मोबाइल आपतकालीन प्रतिक्रिया प्रणालीको GPS निर्देशांक तत्काल मद्दत पठाउन प्रयोग गर्नेछौं।
हामीलाई प्रत्येक दिन यो प्रश्न सोधिन्छ। म किन मद्दतको लागि कल गर्न मेरो फोन प्रयोग गर्दिन? सेलफोन एक महान मोबाइल चिकित्सा चेतावनी प्रणाली हो जबकि तिनीहरूसँग धेरै सीमित धेरै सुविधाहरू छन्। तिनीहरू महान छन् यदि तपाईं फोन नम्बर डायल गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ बताउनुहोस्, र तपाईंको चिकित्सा अवस्थाको प्रेषकलाई सूचित गर्नुहोस्। वास्तविकतामा, आपतकालिन परिस्थितिमा यी सबै चीजहरू गर्न सम्भव छैन।
मोबाइल आपतकालीन प्रतिक्रिया प्रणालीहरू फरक छन् किनकि तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको मद्दतको लागि कल गर्न बटन थिच्नु पर्छ। फोन नम्बर याद गर्नु पर्दैन, तपाईलाई कसैलाई आफ्नो स्थान बताउनु पर्दैन, र हाम्रो जीवन सुरक्षा अपरेटरहरुसँग पहिले नै फाईलमा आधारभूत मेडिकल जानकारीको प्रोफाइल छ। त्यस तरीकाले यदि तपाईं आपतकालको बेलामा प्रतिक्रिया दिन असक्षम हुनुभयो भने हामी तपाईंलाई अझै मद्दत पठाउन सक्दछौं!
ती तीन मुख्य पोइन्टहरूले हाम्रा सबै ग्राहकहरूलाई आपतकालिन अवस्थामा सेलफोनको साथ गर्न नसक्ने सहयोग र सहयोग दिन्छ।
अंडरराइटर प्रयोगशालाहरू सूचीबद्ध (UL) ।
CSAA मानकमा उच्च प्रशिक्षित अपरेटरहरू।
Who could benefit fromamobile system?
मोबाईल अलर्ट प्रणालीबाट कसले फाइदा लिन सक्छ?
धेरै व्यक्तिहरू विश्वास गर्दछन् कि मोबाइल आपतकालीन प्रतिक्रिया प्रणालीहरू केवल बुढाका लागि हुन्। सत्य यो हो कि अरू धेरै व्यक्तिहरूले दिनहुँ हाम्रो सेवाबाट फाइदा लिन्छन्! केहि उदाहरणहरू: